ပရီးမီးယားလိဂ်တိုက်စစ်မှုးတဦးကို ခေါ်ယူဖို့ ဆိုးရှားကိုတိုက်တွန်းလိုက်တဲ့ မက်အော့ဒန် - UMN
ပရီးမီးယားလိဂ်တိုက်စစ်မှုးတဦးကို ခေါ်ယူဖို့ ဆိုးရှားကိုတိုက်တွန်းလိုက်တဲ့ မက်အော့ဒန်
October 9, 2019 - by United News - LeaveaComment
ESPN ရဲ့ အစီအစဉ် တင်ဆက်သူ ဖြစ်တဲ့ မက်အော့ဒန်က ၀ုဖ်အသင်းရဲ့ တိုက်စစ်မှုး ဖြစ်တဲ့ ရာအူး ဂျီမီနက်ဟာ မန်ချက်စတာ ယူနိုက်တက် အသင်းကို ချက်ချင်း တိုးတက်အောင် လုပ်ပေး နိုင်မယ့်သူ ဖြစ်တယ်လို့ ဆိုသွား ပါတယ်။ ၀ုဖ်ရဲ့ မက္ကဆီကို တိုက်စစ်မှုး ဂျီမီနက်ဟာ ပြီးခဲ့တဲ့ ရာသီက ၀ုဖ်အသင်း အတွက် အထူး ခြေစွမ်းပြကာ ယူရိုပါလိဂ် ၀င်ခွင့် ရယူ ပေးခဲ့သလို ဒီရာသီ မှာလည်း အသင်း အတွက် ပြိုင်ပွဲစုံ ၁၆ ပွဲမှာ ၈ ဂိုး သွင်းဂာ ၂ ဂိုး ဖန်တီး ထားပါတယ်။
ဂျီမီနက် ရဲ့ အကောင်းဆုံး ခြေစွမ်းကိုတော့ ပြီးခဲ့တဲ့ တနင်္ဂနွေနေ့က ၀ုဖ် တို့ မန်စီးတီး ကို အီတီဟတ် မှာ ၂ – ၀ နဲ့ အံ့အားသင့်ဖွယ် အနိုင် ရခဲ့တဲ့ ပွဲမှာ မြင်တွေ့ခဲ့ ရပြီး မက္ကဆီကို စတားဟာ စီးတီး ခံစစ် ကစားသမား တွေကို တစ်ပွဲလုံး ဒုက္ခ ပေးနိုင် ခဲ့တဲ့ အပြင် အဒမ်မာ ထရာအိုရေး အတွက်လည်း ၂ ဂိုး စလုံးကို ဖန်တီး ပေးနိုင်ခဲ့ပါတယ်။
ဂျီနီနက် ဟာ ပရီးမီးယားလိဂ် ရဲ့ လျှော့တွက် အခံရဆုံး တိုက်စစ်မှုးတွေ ထဲက တစ်ဦးလား ဆိုတဲ့ မေးခွန်းကို အော့ဒန် က “ကျွန်တော့် အမြင် ကတော့ သူဟာ ဂိုးတွေ သွင်းယူ နိုင်သလို တကယ်ကောင်းတဲ့ တိုက်စစ်မှုး တစ်ဦးလည်း ဖြစ်ပါတယ်။ ကျွန်တော့် အမြင် ၀ုဖ် အသင်းဟာ သူတို့ကို ဒီရာသီ ပရီးမီးယားလိဂ် မှာ အဆင့် ၇ ၈ ထဲ ၀င်အောင် ထပ်မံ ပို့ဆောင် ပေးနိုင်မယ့် ကစားသမား တစ်ဦးကို ပိုင်ဆိုင် ထားတာ ပါ။ ”
” ဒါပေမယ့် သူ ထိပ်တန်း ကလပ် အသင်း တစ်ခု မှာကော ရှင်သန် နိုင်အုံးမှာလား ? ကျွန်တော် ကတော့ သူ ဒီလို လုပ်နိုင်စွမ်း ရှိတယ်လို့ ထင်ပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့ ခုနက မန် ယူနိုက်တက် အကြောင်းကို ပြောခဲ့ ကြပါတယ်။ ကျွန်တော် ကတော့ သူ မန်ချက်စတာ ယူနိုက်တက် အသင်းမှာ ကောင်းကောင်း လုပ်နိုင်စွမ်း ရှိတယ်လို့ ယူဆ ထားပြီး သူဟာ အိုးထရပ်ဖို့ဒ် ကလပ်ကို ချက်ချင်း ဆိုသလို တိုးတက်စေမှာပါ။ ဒါ့ကြောင့် အမှန်ပါပဲ။ သူဟာ ပရီးမီးယားလိဂ် ရဲ့ လျော့တွက် အခံရဆုံး တိုက်စစ်မှုးတွေ ထဲက တစ်ဦး ဖြစ်ပါတယ်။” လို့ ဆိုသွား ပါတယ်။
ယူနိုက်တက်ဟာ ပြီးခဲ့တဲ့ နွေရာသီ အပြောင်းအရွေ့ တုန်းက တိုက်စစ်မှုးတွေ ဖြစ်ကြတဲ့ ရိုမီလူ လူကာကူ နဲ့ အလက်ဆစ် ဆန်းချက် တို့ကို အင်တာမီလန် အသင်းဆီ လက်လွှတ် ခဲ့ပါတယ်။ မန်နေဂျာ အိုလီဂန်နာ ဆိုးရှားက သူဟာ လာမည့် ဇန်န၀ါရီ အပြောင်းအရွေ့ ဈေးကွက် ထဲမှာ တိုက်စစ်မှုး တစ်ဦး ရှာဖွေ သွားမှာ ဖြစ်တယ်လို့ ဆိုထား ခဲ့ပါတယ်။
ဆိုးရှား က “ကျွန်တော်တို့ အလက်ဆစ် နဲ့ ရိုမီလူ တို့ကို လက်လွှတ် ထားခဲ့ ပါတယ်။ လာမည့် အပြောင်းအရွေ့မှာ ကျွန်တော်တို့ တိုက်စစ်မှုး တစ်ဦးကို ရှာဖွေ သွားမှာပါ။ ကျွန်တော်တို့ သွင်းဂိုးတွေ ဂိုးဖန်တီးမှုတွေ လုပ်ပေး နိုင်တဲ့ တိုက်စစ်မှုးကို ရှာဖွေ သွားမှာပါ။ ဈေးကွက် ထဲမှာ တိုက်စစ်မှုးတွေ အများကြီး ရှိခဲ့ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် သူတို့ဟာ ကျွန်တော်တို့ လိုချင်တဲ့ သူတွေ မဟုတ် ခဲ့ပါဘူး။ အကယ်၍ မှန်ကန် သင့်တော်တဲ့ တိုက်စစ်မှုး တစ်ဦး တွေ့ခဲ့မယ် ဆိုရင် ကျွန်တော်တို့ ခေါ်ယူ သွားမှာပါ။ ”
” ကိုယ့်ဘက်က ၁၀၀% မသေချာဘူး ဆိုရင် ကျွန်တော်တို့ ကစားသမားတွေ ခေါ်ယူ သွာဖို့ မရှိပါဘူး။ ကစားသမား တစ်ဦးကို တွေ့သွားပြီ ဆိုရင် အဲဒီလူ အနေနဲ့ အသင်းမှာ ကာလရှည် ဆက်နေ သွားမယ့် မှန်ကန်တဲ့သူ ဖြစ်ဖို့ လိုပါတယ်။ ကျွန်တော် ကစားသမား တစ်ဦးကို လိုချင်တာဟာ ကိုယ့်ရဲ့ ဂုဏ်သိက္ခာ အတွက် မဟုတ် ပါဘူး။ ဒါဟာ ကလပ် အတွက်ပါ။’ လို့ ဆိုးလ်ရှားက ပြောဆိုထားပါတယ်။
ESPN ရဲ့ အစီအစဉျ တငျဆကျသူ ဖွဈတဲ့ မကျအော့ဒနျက ဝုဖျအသငျးရဲ့ တိုကျစဈမှုး ဖွဈတဲ့ ရာအူး ဂြီမီနကျဟာ မနျခကျြစတာ ယူနိုကျတကျ အသငျးကို ခကျြခငျြး တိုးတကျအောငျ လုပျပေး နိုငျမယျ့သူ ဖွဈတယျလို့ ဆိုသှား ပါတယျ။ ဝုဖျရဲ့ မက်ကဆီကို တိုကျစဈမှုး ဂြီမီနကျဟာ ပွီးခဲ့တဲ့ ရာသီက ဝုဖျအသငျး အတှကျ အထူး ခွစှေမျးပွကာ ယူရိုပါလိဂျ ဝငျခှငျ့ ရယူ ပေးခဲ့သလို ဒီရာသီ မှာလညျး အသငျး အတှကျ ပွိုငျပှဲစုံ ၁၆ ပှဲမှာ ၈ ဂိုး သှငျးဂာ ၂ ဂိုး ဖနျတီး ထားပါတယျ။
ဂြီမီနကျ ရဲ့ အကောငျးဆုံး ခွစှေမျးကိုတော့ ပွီးခဲ့တဲ့ တနင်ျဂနှနေကေ့ ဝုဖျ တို့ မနျစီးတီး ကို အီတီဟတျ မှာ ၂ – ၀ နဲ့ အံ့အားသငျ့ဖှယျ အနိုငျ ရခဲ့တဲ့ ပှဲမှာ မွငျတှခေဲ့ ရပွီး မက်ကဆီကို စတားဟာ စီးတီး ခံစဈ ကစားသမား တှကေို တဈပှဲလုံး ဒုက်ခ ပေးနိုငျ ခဲ့တဲ့ အပွငျ အဒမျမာ ထရာအိုရေး အတှကျလညျး ၂ ဂိုး စလုံးကို ဖနျတီး ပေးနိုငျခဲ့ပါတယျ။
ဂြီနီနကျ ဟာ ပရီးမီးယားလိဂျ ရဲ့ လြှော့တှကျ အခံရဆုံး တိုကျစဈမှုးတှေ ထဲက တဈဦးလား ဆိုတဲ့ မေးခှနျးကို အော့ဒနျ က “ကြှနျတေျာ့ အမွငျ ကတော့ သူဟာ ဂိုးတှေ သှငျးယူ နိုငျသလို တကယျကောငျးတဲ့ တိုကျစဈမှုး တဈဦးလညျး ဖွဈပါတယျ။ ကြှနျတေျာ့ အမွငျ ဝုဖျ အသငျးဟာ သူတို့ကို ဒီရာသီ ပရီးမီးယားလိဂျ မှာ အဆငျ့ ၇ ၈ ထဲ ဝငျအောငျ ထပျမံ ပို့ဆောငျ ပေးနိုငျမယျ့ ကစားသမား တဈဦးကို ပိုငျဆိုငျ ထားတာ ပါ။ ”
” ဒါပမေယျ့ သူ ထိပျတနျး ကလပျ အသငျး တဈခု မှာကော ရှငျသနျ နိုငျအုံးမှာလား ? ကြှနျတျော ကတော့ သူ ဒီလို လုပျနိုငျစှမျး ရှိတယျလို့ ထငျပါတယျ။ ကြှနျတျောတို့ ခုနက မနျ ယူနိုကျတကျ အကွောငျးကို ပွောခဲ့ ကွပါတယျ။ ကြှနျတျော ကတော့ သူ မနျခကျြစတာ ယူနိုကျတကျ အသငျးမှာ ကောငျးကောငျး လုပျနိုငျစှမျး ရှိတယျလို့ ယူဆ ထားပွီး သူဟာ အိုးထရပျဖို့ဒျ ကလပျကို ခကျြခငျြး ဆိုသလို တိုးတကျစမှောပါ။ ဒါ့ကွောငျ့ အမှနျပါပဲ။ သူဟာ ပရီးမီးယားလိဂျ ရဲ့ လြော့တှကျ အခံရဆုံး တိုကျစဈမှုးတှေ ထဲက တဈဦး ဖွဈပါတယျ။” လို့ ဆိုသှား ပါတယျ။
ယူနိုကျတကျဟာ ပွီးခဲ့တဲ့ နှရောသီ အပွောငျးအရှေ့ တုနျးက တိုကျစဈမှုးတှေ ဖွဈကွတဲ့ ရိုမီလူ လူကာကူ နဲ့ အလကျဆဈ ဆနျးခကျြ တို့ကို အငျတာမီလနျ အသငျးဆီ လကျလှတျ ခဲ့ပါတယျ။ မနျနဂြော အိုလီဂနျနာ ဆိုးရှားက သူဟာ လာမညျ့ ဇနျနဝါရီ အပွောငျးအရှေ့ ဈေးကှကျ ထဲမှာ တိုကျစဈမှုး တဈဦး ရှာဖှေ သှားမှာ ဖွဈတယျလို့ ဆိုထား ခဲ့ပါတယျ။
ဆိုးရှား က “ကြှနျတျောတို့ အလကျဆဈ နဲ့ ရိုမီလူ တို့ကို လကျလှတျ ထားခဲ့ ပါတယျ။ လာမညျ့ အပွောငျးအရှမှေ့ာ ကြှနျတျောတို့ တိုကျစဈမှုး တဈဦးကို ရှာဖှေ သှားမှာပါ။ ကြှနျတျောတို့ သှငျးဂိုးတှေ ဂိုးဖနျတီးမှုတှေ လုပျပေး နိုငျတဲ့ တိုကျစဈမှုးကို ရှာဖှေ သှားမှာပါ။ ဈေးကှကျ ထဲမှာ တိုကျစဈမှုးတှေ အမြားကွီး ရှိခဲ့ပါတယျ။ ဒါပမေယျ့ သူတို့ဟာ ကြှနျတျောတို့ လိုခငျြတဲ့ သူတှေ မဟုတျ ခဲ့ပါဘူး။ အကယျ၍ မှနျကနျ သငျ့တျောတဲ့ တိုကျစဈမှုး တဈဦး တှခေဲ့မယျ ဆိုရငျ ကြှနျတျောတို့ ချေါယူ သှားမှာပါ။ ”
” ကိုယျ့ဘကျက ၁၀၀% မသခြောဘူး ဆိုရငျ ကြှနျတျောတို့ ကစားသမားတှေ ချေါယူ သှာဖို့ မရှိပါဘူး။ ကစားသမား တဈဦးကို တှသှေ့ားပွီ ဆိုရငျ အဲဒီလူ အနနေဲ့ အသငျးမှာ ကာလရှညျ ဆကျနေ သှားမယျ့ မှနျကနျတဲ့သူ ဖွဈဖို့ လိုပါတယျ။ ကြှနျတျော ကစားသမား တဈဦးကို လိုခငျြတာဟာ ကိုယျ့ရဲ့ ဂုဏျသိက်ခာ အတှကျ မဟုတျ ပါဘူး။ ဒါဟာ ကလပျ အတှကျပါ။’ လို့ ဆိုးလျရှားက ပွောဆိုထားပါတယျ။
ရလဒ်ဆိုးရွားမှုတွေအတွက်ခံစားရကြောင်း ဖွင့်ဟရင်း လီဗာပူလ်းနဲ့ပွဲက ဘယ်လောက်အထိ အရေးပါသလဲဆိုတာပြောကြားသွားတဲ့ ပါရဲရား
လီဗာပူးနဲ့ကစားတိုင်း အဝတ်လဲခန်းထဲမှာ ခပ်ကြမ်းကြမ်းစိတ်ဓါတ်လှုံ့ဆော်တတ်တဲ့ ကပ္ပတိန်အကြောင်းပြောလာတဲ့ ဘာဘာတော့ဗ်
ယူနိုက်တက်မှာ လူကာကူနဲ့အလောင်းအစားလုပ်ခဲ့တဲ့အကြောင်း ဖွင့်ဟလိုက်တဲ့ဇလာတန်
Previous Article ဒီရာသီယူနိုက်တက်နဲ့ပတ်သတ်လို့ ၀န်ခံမှုတခုပြုလုပ်လိုက်တဲ့ ကွင်းလယ်လူ မာတာ
Next Article ဆန်းချက်ကို အိုးထရက်ဖို့သို့ပြန်မခေါ်လိုပဲ ဈေးသတ်မှတ်လိုက်တဲ့ ယူနိုက်တက်